“Zarazarao hanjakana”: handray anjara ny mpanatrika | NewsMada
“Zarazarao hanjakana”: handray anjara ny mpanatrika
Tsy fialamboly fotsiny ny dihy fa anisan’ny fitaovana ihany koa enti-mampivoatra ny maha olona. Izay indrindra no haseho sy hampahafantarina ny besinimaro ao anatin’ny “Antshow”, hotanterahina eny Ambohitsoa, ny 15 desambra izao. Anisan’ny handray anjara amin’izany ny kaompania Dinirina.
Mifanojo indrindra amin’ny raharaham-pirenena “mafanafana” ny lohahevitra nosafidin-dry Andry Solofo amin’ity hetsika ity. Tsy inona izany fa ny hoe “Zarazarao hanjakana”. Nalaza izany tamin’ny andron’ny fanjanahantany, saingy mbola mitombina mandraka ankehitriny, araka ny nambaran’ity mpanakanto ity.
“Taloha, tia mizara ny Malagasy. Amin’izao fotoana izao kosa, matoa misy mahafoy zavatra, mila tambiny iny… Raha ny mahakasika ity firenena ity kosa, efa voazarazara i Madagasikara ary tsy manana ao anatin’izany akory ny Malagasy…”, hoy hatrany i Andry Solofo, nanazava ity lohahevitry ny seho hoentina ao anatin’ny “Antshow” ity.
Maimaimpoana ary natao ho an’ny rehetra ny “Antshow” satria ny olon-drehetra no mila fivoarana. Tsy ho mpijery fotsiny izy ireo fa handray anjara mihitsy amin’ny atrikasa sy fifampizarana traikefa amam-pahalalana. Hitohy amin’ny soradihy, holalaovin’i Andry Solofo, izany.